सरकारी सेवामा पहिलो, दोस्रोमा नाम निकालेपछि बिहे गरेका जोडीको २ बर्ष नवित्दै सम्बन्धबिच्छेद – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियसरकारी सेवामा पहिलो, दोस्रोमा नाम निकालेपछि बिहे गरेका जोडीको २ बर्ष नवित्दै सम्बन्धबिच्छेद
काठमाडौं । भारतमा एक जोडीको सम्बन्धविच्छेदलाई लिएर चर्चा सुरु भएको छ । सन् २०१५ मा यूपीएससीमा शीर्ष स्थान पाएका भारतिय प्रशासकीय सेवा (आईएएस) अधिकारी टीना डाबी र उनका आईएएस पति अतहर खानले जयपुरको परिवार अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि मुद्दा दायर गरेका थिए ।
दुवैले आपसी सहमतिबाट यो सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरेका हुन् । उनीहरूको सन् २०१८ मा विवाह भएको थियो । अतहर कश्मीरी परिवारका हुन् । जब टीना यूपीएससीको प्रथम बनिन्, त्यस बर्ष अतहर दोस्रो स्थानमा थिए । भनिन्छ कि टीना र अतहर प्रशिक्षणको क्रममा एक अर्काको नजिक आए र विवाह गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
दुबै राजस्थान क्याडरका अधिकारीहरु हुन् । उनीहरुको जयपुरमा पोष्टिङ्ग गरिएको छ । टीनाले केही समय अगाडि उनको सामाजिक सञ्जालमा भएका खातामा खानको उपनाम हटाएकी थिइन । यस पछि, अतहरले इन्स्टाग्राममा टीनालाई अनफलो पनि गर्दिएका थिए ।
त्यसबेलादेखि उनीहरूको विवाहको बारेमा विभिन्न चर्चाहरु भइरहेका थिए । सन् २०१८ देखि दुबैको विवाह चलिरहेको थियो । आईएएस दम्पतीलाई धेरै राजनीतिज्ञहरूले बधाई दिएका थिए । जबकि, हिन्दू महासभाले यस विवाहलाई प्रेम जिहाद भनेको थियो ।टीना डाबीको परिवार मूल रूपमा जयपुरका हुन् ।
यद्यपि उनको जन्म भोपालमा भएको थियो ।कान्वेन्ट अफ जीसस एण्ड मेरीमा अध्ययन गर्ने टीना सुरुदेखि नै उत्कृष्ट छात्रा थिइन । उनी सात कक्षामा हुँदा उनको सम्पूर्ण परिवार दिल्लीमा बसाई सरेको थियो । टीनाका बुबा जसवन्त डाबी र आमा हिमानी दुबै इन्जिनियर हुन् । दुबै यूपीएससीमा रआइएस परीक्षा उत्तीर्ण छन् ।
यूपीएससीमा छनौट भएपछि टीना र अतहरले मसूरीमा प्रशिक्षण लिए । यहाँबाट दुई जना नजिक आएको बताइएको छ । विवाह अघि पनि टीनाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस अपडेट गरेकी थिइन् । त्यसमा उनले आफु आमिरसँग सम्बन्धमा रहेको भनेकी थिइन् ।
इ’जरायली ल’डाकू विमानद्वारा सोमबार पनि गा’जा शहरमा भि’षण आ’क्र’म’ण
अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खोल्न गरिएको आग्रह प्रधानमन्त्री मोरिसनद्वारा अस्वीकार
टिकटकबाट सुरु भएको थियो इ’जरायल–प्यालेस्टाइन यु’द्ध
भारतमा बन्यो को’रोनाविरुद्ध ‘खाने औ’षधि’, आज लन्च गरिँदै !
सुकृति शर्मालाई ५ लाख ८४ हजार राशिको ब्लूमक्विस्ट पुरस्कार
फेरी गोर्खालीको नाम उचो, सि’रियामा खु’कुरीको सहायताले चारजना गोर्खालीले समाते १२ आ’तं’क’का’री !
अस्पताल भर्ना गराएर आफन्तहरु फर्केर आएनन्, उनले चारा खु’वाएर हुर्काएको परेवा यसरी खोज्दै आयो
आज भारतको गुजरातमा श’क्तिशा’ली ‘ताउते’ आउने, १५ सय को’रोना संक्रमितलै अन्य जिल्लामा सा’रियो
बाटोको छेउमा एम्बुलेन्स रोकेर एउटी युवतीसँग ३ पुरुषको म’स्ती, एम्बुलेन्स ह’ल्लिएपछि खुल्यो पो’ल !
रेखालाई मेरो सम्पत्ति नदिनु भन्दै जब मुकेशले दे’ह’त्या’ग गरे